Uhlaziya ingane ngomnyaka wokuqala wokuphila kwakhe
Ukuxilongwa kwe-laboratory kwengane kuyingxenye ebalulekile yokuhlolwa kwezokwelapha okudingekayo. Ukuhlaziywa kwengane ngonyaka wokuqala wokuphila kwakhe kuthathwa ngenhloso yokuvimbela izifo ezihlukahlukene ezithathelwanayo, okucacisa ukuthi ngabe ukucabanga kwezokwelapha kutholakala kuyadingeka yini, futhi ukuze uthole idatha yonke impilo yengane. Ukuthembeka kwemiphumela yazo zonke izihlalutyo ngokuqondile kuxhomeke ekutheni bakwazi ukuhlanganisa kahle izinto ezifanele. Futhi kulokhu kuhlolisiswa kwempilo yengane, ulwazi mayelana nesithombe esijwayelekile salokho okuhlolwa kulesi sizukulwane kubhekwa ukuthi kuhlelwe indima enkulu, futhi yiziphi ezingalahlwa ngokukhululekile ukuze ungalimazi ingane yakho futhi. Ngendlela, yile nkinga ekhathazayo abazali abaningi, okungaphansi kombuzo, isibonelo, ngemigomo ephoqelekile.
Yikuphi ukuhlaziywa kwengane onyakeni wokuqala wokuphila kuthathwa njengesibopho
Ukuhlaziywa kokuqala kwengane yizivivinyo ukuthi ingane izozizwa ngokushesha esibhedlela ngemuva kokuzalwa. Kuloluhlu lwezoxilongo zezempilo, umntwana uthola ukuhlolwa kwegazi, okumelwe kuthathwe emvuthweni wesibindi ukuze kutholakale isifo sofuba, i-HIV isifilis. Kanti futhi udokotela angathumela igazi ukuthola izifo ezengeziwe, isibonelo, lapha kungenzeka ukuthi uphathe izingane ukuhlaziywa kwi-transaminases. Lokhu kuhlolwa kusetshenziswe uma i-jaundice itholwe enganeni. Ngaphezu kwalokho, umntwana uthatha igazi esithende ukuze abone ukuthi kukhona ukutholakala kwegazi, futhi abonakalise ukwehla komsebenzi we -roid ne-hyperphenylketonuria. Ukuzisola okukhulu, le nqubo ibhekwa ubuhlungu kakhulu kumntwana, kodwa naphezu leli qiniso elibi, kubhekwe njengokuphoqelekile. Ukudlulisa lonke uhlu lwalezi zivivinyo ezigunyazayo ngemuva kokuvela kwengane yakho, ingane, uma ingenayo izimpawu zokungahambi kahle, ihlolwa ngokuhlolwa okulandelayo ku-1 ngenyanga, izinyanga ezintathu, izinyanga ezingu-6, bese kuthi ngonyaka owodwa futhi uqhubeke njalo ngonyaka. ukuhlaziywa okuhleliwe kwengane ngonyaka wokuqala wokuphila kwakhe sifuna ukutshela abazali abasanda kubenziwe ngokuningiliziwe.
Njengoba sesishilo kakade, ngonyaka ongu-1 umntwana uthola olunye ucwaningo lwezempilo, olungamukeleki ngaphandle kokuhlaziywa. Lezi zivivinyo kumele, kuzo zonke izindleko, zibandakanye ukuvivinya kwegazi jikelele, ukuhlolwa komchamo jikelele, ukuhlaziywa kwamathambo we-I / worm kanye nesimiso se-enterobiosis. Kodwa eminyakeni eyi-1.5 ingane ibuye iphinde inikele ukuhlolwa kwegazi jikelele kanye nokunye kuye ukuhlaziywa okujwayelekile komchamo.
Ngendlela, kubalulekile ukukhumbula ukuthi ngomnyaka umfana udinga ukuhlola inqubo ye-urologist, kanti le ntombazane inomdlavuza wezifo. Ngesikhathi sokuhlolwa lokhu, izingane kufanele zithathe ama-swabs we-nycroflora. Ngenxa yalokho, uma imiphumela yokuhlolwa ilungile, ukuhlolwa okuhleliwe okulandelayo kufanele kwenziwe ngaphambi kokuba ingane yakho ingene esikoleni samabanga aphansi, futhi uma umphumela ungalungile - udokotela kufanele athole izifundo eziphindaphindiwe ukuze acacise ukuxilongwa.
Konke ukuhlaziywa okubalwe ngenhla kubhekwa njengokuphoqelelwe ukuthi kuhlolwe ngaphandle kokungalahlwa noma ukungabaza. Kakade, ngokusekelwe emiphumeleni yokugcina, ukuhlolwa okwengeziwe kungenziwa ngokwengane wezingane, uma kunesidingo.
Ngendlela, ekuboneni kuqala, ungase ucabange ukuthi ingane yakho iphilile ngokuphelele, ngoba awukwazi ukubona noma yiziphi izimpawu zokugula. Kungenxa yalesi sizathu ukuthi ungabala konke ukuqinisekiswa kukadokotela njengengcebo enkulu yesikhathi, kodwa lapha kubalulekile ukukhumbula ukuthi akuzona zonke izifo ezikwazi ukuzibonakalisa ngokushesha, futhi ukuhlaziywa okufika kwesikhathi kungakwenza ekuqaleni kwesigaba. Ngaphezu kwalokho, ukuxilongwa kwempilo yengane kuzokusiza ngesikhathi sokugwema izifo kuphela, kodwa futhi nezinkinga ezivela kubo. Ngakho-ke, akufanele uthembe izinkolelo zakho, ngoba impilo yengane yakho isezandleni zakho kuphela!
Abazali abasha endleleni
Khumbula ukuthi umuntu akufanele ahlale ehudula ngokuhlaziywa kwezingane ukuwabeka "ebhokisini elingemuva". Futhi, umuntu akufanele azame ukucacisa imiphumela yemiphumela yokuhlaziywa, okungukuthi, njengombuso, ebhaliwe ngokungalungile kumakhadi, ngoba ngonyaka owodwa ingane ngayinye inezinkomba zayo siqu. Kulokhu, uma ukuxilongwa kungenembile, abazali abaningi benza iphutha, bezama ukuzimela ngokuzimela lesi sifo nezindlela zokuzitholela, ngakho-ke isiphetho sokugcina kufanele senziwe kuphela ngososayensi. Kodwa uma unemibuzo eyengeziwe ekuphetheni kwezinkomba zokuhlaziya, ungachithi isikhathi, kodwa qiniseka ukuthi uthintane nodokotela wezingane.
Kudingeka ngaphambi kokuhlaziywa kwengane
Ungakhohlwa ngaphambi kokuba uthathe izivivinyo zengane, kubalulekile ukuthi uxoxe nodokotela mayelana nokuqoqwa nokulethwa kwezivivinyo. Futhi, udinga ukuvimbela ukungenisa ama-antibiotic kungakapheli ngaphambi kwe-dvenadel ngaphambi kokuhlolwa noma ukuxwayisa mayelana nokwelashwa okuqhubekayo kwesidokotela sesazi sesifunda sakho. Ngemuva kwalokho, kufanele ulungise iziqukathi ezikhethekile zokuqoqa izinto ekutholeni ukuhlolwa kwamanzi kanye nomchamo. Ngenxa yalezi zinhloso, iziqukathi ezibolile, ukupakishwa kwepulasitiki noma ukuhlanza okuhlanzekile kwemithwalo kufanelekile. Ngokushesha ngaphambi kokuthatha ukuhlolwa, kunconywa ukuthi ugweme ama-x-ray, i-ultrasound nezinqubo ezihlukahlukene ze-physiotherapy.
Futhi ekugcineni ngifuna ukusho ukuthi ukuhlaziywa kwengane ngonyaka wokuqala wokuphila kwakhe - lokhu akuyona indlela yokuziphatha, engahlangene nodokotela, kuyisidingo futhi kuyadingeka. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi ngonyaka lapho umntwana engakwazi ukutshela abazali bakhe ukuthi ukhathazekile, ngakho-ke ukuxilongwa okwesikhashana kuzokusiza ukugcina impilo yengane ngokugcwele, futhi ugcine abazali bakhe ekucabangeni okungadingekile kanye nokuhlangenwe nakho okuhlangene ngqo nabo!
Ukuthuthukiswa kwengane ngenyanga yokuqala
Ubisi lwebele lungukudla okungcono kakhulu komntwana
Inyanga yeshumi yokuthuthukiswa kwengane
Ukuthuthukiswa kwengane kusukela ekuzalweni kuze kube unyaka owodwa
Ukugqoka kanjani usana olusanda kubusika
Inhlanzeko ebusweni yentombazane esanda kuzalwa
Ukuhlukaniswa ngobusuku ngobusuku bukaKhisimusi: ukutshela intombazane ngomfana
Uthando ethuneni: indlela yokuthanda umuntu
Indlela yokugwema isehlukaniso?
Ukupheka: ukudla okusheshayo, okumnandi
Pie nge strawberries kanye cottage shizi
Izimfihlo zomshini omuhle: imithetho engu-3 eyokusiza ukuba ufike ngokushesha
Amasks ebusweni ngamafutha omnqumo
Amaqebelengwane amancane e-chocolate
I-carrot isaladi enenyama
Izibopho zezinhlanzi ze-Lemon-garlic
Kuncono ukugeza amaphilisi?
Ukulindela umntwana ozayo
Ukuzivocavoca kokwelashwa emanzini okukhuluphala
Idolobha lasekhaya, kwakuphi umuzwa wendlu?